नेकपा घर झगडामा व्यस्त हुँदा कांग्रेस के गर्दैछ ? spacekhabar
Sunday, January 24, 2021 | आइतबार, माघ ११, २०७७
नेकपा घर झगडामा व्यस्त हुँदा कांग्रेस के गर्दैछ ?
स्पेसखबर काठमाडौं,७ मंसिर
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा) घर झगडामा व्यस्त रहँदा अर्काे प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस चाँही के गर्दैछ भन्ने आम मानिसले चासो राख्न थालेका छन् ।कांग्रेसको भित्रको अवस्था पनि नेकपाको जस्तै नै हो तर उ विवादलाई थाँती राखेर अहिले चुपचाप बसिरहेकाे छ।
नेकपामा जस्तो पत्रको सवालजवाफको स्थिति कांग्रेसमा देखापरेको छैन । तर त्यहाँ पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी रुपमा गर्ने नियुक्ति र निर्णयले बेलाबख असहज स्थिति उत्पन्न गराउने गरेको छ। देउवाले रिक्त विभाग र संगठनमा आफू निकटका व्यक्तिलाई छानीछानी नियुक्ति गर्ने विषयले किचलो उत्पन्न गराउने गर्दछ । नेकपाको घर झगडाले कांग्रेस नेतृत्व केही नरम अवश्य भएका छन् ।
एउटा पार्टीभित्र नेता पिच्छेको समूहले गर्दा सधै जसो विवाद हुने गरेको छ । यो नेकपामा मात्र होइन कांग्रेस लगायतका अन्य पार्टीमा यस्तै समस्या छ ।
बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्षले सभापतिबाट भएका मनलाग्दी क्रियाकलापको विरोध गर्ने गरेका छन् । १४ औं महाधिवेशनको तयारीमा रहेको कांग्रेसमा आगामी नेतृत्वका लागि दौडधुप र क्याम परिवर्तनका खेलहरु भई रहेका छन् ।
थुप्रै पटक सभापति भईसकेका देउवाले फेरि पनि इच्छा देखाएका छन् । उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई आगामी नेतृत्वका लागि पटक पटक सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका सभापति देउवाबाट पुनःसभापतिको इच्छा व्यक्त भएपछि निधि उनको उधाराे आश्वासनकाे पछि नलागेर आफैंं कस्सिएका छन् ।
यस्तै गरी पौडेल पक्षमा पनि थुप्रै व्यक्तिले नेतृत्वका लागि आकांक्षा राखेका छन् । शशांक कोइराला, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह,कल्याण गुरुङ, सुजता कोइरालाले नेतृत्वका लागि दावी गरेका छन् । महाधिवेशन नै हुने पक्का भएपछि नेतृत्वका आकांक्षी अझ बढ्ने पक्का छ ।दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको चाहना र सक्रियताले गर्दा नेताहरु देउवा र पौडेललाई नै अप्ठयारो अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अहिले दुई विपरीत ध्रुवमा देखिएका देउवा र पौडेल नै कालान्तरमा मिल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना पनि एकातिर जीवितै छ । देउवालाई साथ दिँदै आएका निधिले पनि सभापतिमा दावी गरेपछि उनी नयाँ सारथीको खोजीमा छन् ।
देउवा र पौडेलको समिकरण अहिले चर्चामा मात्रै सिमित छ ।पाँच दशकदेखिका सहयात्री दुबैलाई दोस्रा पुस्ताले पेल्न खोजे एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बाध्यता भने हुन सक्छ । दुबै नेताको सबैभन्दा कठीन खुट्किलो सभापतिको उम्मेदवार को हुने भन्ने हो ।त्यसैले सहकार्य त्यति सजिलो भने छैन । देउवा र पौडेल मिल्दा पार्टीभित्रको समस्या आधा समाधान हुने विश्वास गरिन्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर ७, २०७७, ०१:३२:००
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको निवेदन पेश
मुख्यमन्त्री शेर्पाले मोडलसँग गरे बिबाह
कानुन व्यवसायीलाई होच्याउने अभिव्यक्ति: सत्तापक्षको निर्लज्ज प्रहार भएकोले प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने बारका पूर्बअध्यक्षहरुको ठहर
'अहिलेको कदमको विरोध गर्नेहरू संसदलाई पाँच वर्षे जागिर ठान्नेहरु नै हुन्'
सातै प्रदेशमा काेराेना विरुद्धको खोप लगियाे
हिमालमा हिउँ छैन, अन्नपूर्ण लगायतका सेता हिमाल काला हुँदै
राजपत्रको आधिकारिकता जाँच गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा निवेदन
निर्वाचन आयोगले भन्याे-नेकपाकाे दुवै पक्षबाट गरिएका दावी दलको विधानअनुसार देखिएन
बागलुङ र पर्वत जोड्ने लामो झोलुङ्गे पुललाई गिनिज बुकमा दर्ता गर्ने तयारी
संसद बिघटन गरेर ओली राजतन्त्र फर्काउन खोज्दैछन्ः प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री कि संसदमा फर्केर आउनुपर्छ कि हराउनुपर्छ भन्दा प्रधानन्यायाधीशले भने, 'यस्तो उदाहरणमा नजाऔँ '
'देशले खाेजेकाे अभिभावकीय जिम्मेवारी अब कांग्रेसले निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ'
राजा फाल्न जसरी नै संसद पुनःस्थापनाको लागि पनि एक ढिक्का हुनुपर्छ : चित्रबहादुर केसी